प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले नै गरे ओलीको ट्वीटर ह्यान्डल दुरुपयोग | प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले नै गरे ओलीको ट्वीटर ह्यान्डल दुरुपयोग |
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले नै गरे ओलीको ट्वीटर ह्यान्डल दुरुपयोग
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूूर्य थापाले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ट्वीटर ह्यान्डलबाट मंगलबार दिउँसो एउटा पोष्ट सार्वजनिक गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको भेरिफाइड एकाउन्टबाट भएको उक्त ट्वीटको स्क्रिन सट अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा भइरहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् ... ट्रम्पको पराजयसँगै रिपब्लिकन पार्टीमा शुरू भयो उथलपुथल
आखिर किन उक्त ट्वीटले चर्चा पायो ? खास के थियो त्यसमा ?
हटाइएको ट्वीटमा पत्रकार मात्रिका पौडेलले नयाँ व्यवसाय गर्न लागेकोमा ओलीको तर्फबाट शुभकामना दिइएको थियो ।
यस्तै दुबै कोरोना संक्रमित भएको र संक्रमणमुक्त भएपछिको भेटमा ती पत्रकारले खुशी हुने योजना सुनाउँदा दुबै जना दंग भएको उल्लेख गरिएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस् ... नेकपा सचिवालय बैठक सुरु, ओलीले लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्ने
हेर्नुस् प्रधानमन्त्रीको ट्वीटरबाट भएको पोष्ट :
तर, ट्वीटसहितको फोटोमा भने पत्रकार पौडेल र थापाको फोटो रहेको छ । पौडेलले अनलाइनखरबाट केही समयअघि मात्र राजीनामा दिएका छन् । साथै, थापा र पौडेल कोरोना संक्रमित पनि भएका थिए । थापाले आफ्नै कार्यकक्षमा गरेको भेटबारे जानकारी गराउँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको ट्वीट खुलेको पत्तो पाएनन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् ... माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न ओलीको अफर, माधवले भने, ‘मलाई चाहिएन, तपाई सुध्रिनुस्’
यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीका विभिन्न सूचनाहरु गलत तरिकाबाट प्रसारित भएको भन्दै आलोचना बढेको थियो ।
थापाले आफ्नो ट्वीटरमा पछि राखेको पोष्ट :
जनताले दिएको जनादेशमाथि खेलवाड गर्न हुन्न, पार्टी फोड्न
यस्तो छ ओलीले सचिवालयमा खामभित्र राखेर बाँडेको प्रस्ताव
ओलीको प्रस्तावमा के छ ? प्रवक्ता भन्छन :